Dam Bixinta - Beijing IWHR Corporation (BIC)
Biyo Xidheenka ay BIC ka dhistay Bangladesh
Biyo Xidheenka Sonai (L = 45m, H = 4m)
Bakkhali Rubber Dam
(L = 84m, H = 3.5m, Laba Dhinac Biyo haynta)
Kaoraid Rubber Dam (L = 25m, H = 3m)
Biyo Xidheenka Sonai Nadi (L = 54m, H = 3.5m)
BIC waxay gacan ka geysatay aasaasida WMCA waxayna bixisay barnaamij tababar oo loogu talagalay injineerada fulinta ee Bangladesh
Biyo xireenka ay BIC ka dhistay Vietnam
BIC waxay dhistay biyo xireenkii ugu horeeyay ee Vietnam sanadkii 1997 (L = 25m, H = 2m)
Biyo Xidheenno kale oo ay BIC ka dhistay Vietnam
Biyo xireen ay BIC ka dhistay Thailand
Biyo xireenka oo leh L = 60m, H = 2.3m oo ku yaal Thailand ayaa BIC dib u dhis ku sameysay tan iyo markii ay waxyeello soo gaartay, ka hor intaan waxaa asal ahaan dhignay shirkad xeebta ka baxsan.
Biyo xireenkan caagga ah oo leh L = 93m, H = 4.15m oo ku yaal Thailand, oo asal ahaan ay dhistay shirkad ka baxsan biyaha, ayaa dib u dhis ay ku sameysay BIC 9-kii Maarso, 2009 tan iyo markii ay waxyeelloobeen ka dib markii ay socdeen afar sano oo keliya
Biyo Xidheenka ay BIC ka dhistay KENYA
Biyo xireenkii ugu horreeyay ee Afrika ay yeelato shirkad ajnabi oo caalami ah oo caan ka ah sanadkii 1997, wuxuu dhacay qarxay 2007-dii, waana dayactir ka weynaa. Waxaa dib u soo ceshatay oo hawl galiyay Shirkada Beijing IWHR Corporation bishii Febraayo 2, 2010, waa la howlgaliyay hada. Dhererka biyo xireenka waa 49.5m; dhererka Biyo-xidheenku waa 2.25m.
Mashruuca biyo xireenka Rubber oo ku saleysan EPC oo ku yaal Myanmar
Biyo xireenka Wetkamu (20m dheer, 2.3m sare, biyo buuxin)
Nga Laik Rubber Dam (64m dheer, 1.5m sare, hawo-buuran)
Dhismaha Biyo Xireenka Rubber on Site